चितवन मेडिकल कलेजलाई मुद्दा फिर्ता लिन आक्रमणकारीको दबाब,के हुँदै छ एनएमएको अल्टिमेटम ? – Health Post Nepal
चितवन मेडिकल कलेजलाई मुद्दा फिर्ता लिन आक्रमणकारीको दबाब,के हुँदै छ एनएमएको अल्टिमेटम ?
२०७६ कार्तिक ७ गते ११:२५
चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने समूहले अस्पताललाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको छ । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्युलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेको समूहले अस्पताललाई प्रहरी कार्यालयमै डिएसपीको रोहबरमा मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । तर, अस्पताल पक्षले भने आक्रमणकारीको दबाबलाई इन्कार गरेको छ ।
आइतबार अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने समूह आपराधिक गिरोह भएको जनाउँदै अस्पतालले आक्रमणबाट अस्पतालमा पुगेको क्षतिबापत १४ लाखबराबरको बिगोदाबीसहित दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि प्रहरीमा किटानी–जाहेरी दिएको थियो । प्रहरीले यसअघि नै घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो । पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई छुटाउन दबाब सिर्जनाका लागि प्रहरी कार्यालय आएको समूहले अस्पताललाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नाकको समस्या लिएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा अकस्मात् मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आइतबार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए । करिब दुई सयको संख्यामा आएका मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा ढुंगामुडासहित तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रमणकारीको हमलाबाट एक सुरक्षाकर्मीसहित २ जना घाइते भएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाका विभिन्न संस्थाले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका थिए । एनएमए चितवनले सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २४ घण्टाभित्र दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया नबढाएमा जिल्लाभर स्वास्थ्यसेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । एनएमए केन्द्रीय समितिको टोलीले गृहसचिवदेखि चितवनका सिडिओलाई समेत भेटेर दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए ।
के हुदै छ एनएमएको अल्टिमेटम ?
२४ घण्टा दोषीमाथि प्रक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया नथालिए जिल्लाभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने अल्मिेटम दिएको चितवन एनएमए (वेयट एण्ड बी) अवस्थामा देखिएको छ । प्रशासन अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाबाट दोषीमाथि कारबाही हुने संकेत देखिएकाले आफूहरु नतिजाको प्रतीक्षामा रहेको चितवन एनएमएले जनाएको छ । ‘पक्राउ परेका ११ जनालाई हाल सम्म छोडिएको छैन,उनीहरुमाथि छानबीन र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया बढिरहेको छ,‘ एनएमएका केन्द्रिय सदस्य डा. अनिल काकीले भने,‘ प्रहरीले कानुन संगत कारबाही अगाडी बढाइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सहयोग गर्नु नै ठीक ठानेर नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छौ । दोषी माथि कारबाही हुनेमा हामीलाई आशा पलाएको छ ।’
आक्रमणकारी पक्षले अस्पताल विरुद्द ज्यान मारेको अभियोगमा उजुरी दिन खोजिरहेको बुझिरहेको डा. कार्की बताए । तर, मुलुकी अपराध सहिता ऐन सम्शोधन भइसकेको अवस्थामा उनीहरुको माग दाबी नपुग्ने हुँदा रोकिएको छ । ‘ जेल विथ आउट वेल नआइसकेको अवस्थामा यस अघिका घटनाहरुमा विद्यमान कानुन अन्तर्गत दोषीलाई ३–४ दिन थुनेर रिहा गर्ने गरिएको थियो ।’ डा.कार्की भने,‘ प्रकाउ परेका सबैलाई म्याद थप गरि केएबसिको माग दाबी बमोजिम मुद्दा प्रक्रिया अगाडी बढाइनुले हाल सम्मको ठुलो सजाय हुन सक्ने संकेत देखिएकाके छ ।’
यद्यपी, कारबाही प्रक्रिया अलिकति पनि बाधा बेवधान ल्याउने कोशिस भए एनएमए शसक्त रुपमा उत्रिने भनाई रहेको छ । यसबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । काउन्सिले उपचारको त्रममा मृत्यु र अस्पतालमाथि दुबै घटनाको थप छानबिन गरिरहेको छ ।